Filtrer les éléments par date : jeudi, 09 août 2018
jeudi, 09 août 2018 20:02
Antsirabe: Vitrine du Vakinankaratra faha-21
Raikitra ary hiditra amin'ny andiany faha-21 ny hetsika ara-toekarena fanaon'ny FIOVA na ny Vitrine du Vakinankaratra izany. Ny 30 - 31 aogositra sy ny 1 septambra 2018 izao no hanaovana izany, manoloana ny Garan'Antsirabe.
Hiompana bebe kokoa ny fanomezan-danja ireo mpandrahara sy mpamokatra ny hetsika amin'ity indray mitoraka ity ary efa vonona amin'izany ireo mpandray anjara, izay efa ny 80%-n'ny noheverina no efa vonona sy nisoratra anarana, hoy ny mpikarakara.
"Ny sehatra tsy miankina sy ny mpiara-miombon'antoka, manosika ny fampandrosoana an'i Vakinankaratra", io ny lohahevitra voizina amin'ity taona ity raha ny nambaran'Atoa Ramarijaona Andrianjafy, filohan'ny Fivondronan'ny Orinasan'i Vakinankaratra.
jeudi, 09 août 2018 19:58
Sambava: Hita faty androany ilay dahalo votsotra teo ampelatanan’ny Zandary
Ankizy roa manodidina eo amin’ny 13 taona, izay sendra nandeha nihaza ireny voronkely hamoron-drano ireny, no taitra raha nahita faty tao anaty lobolobo, ka nihazakazaka nody haingana nampandre ny Ray aman-dreny, ary ireto farany ireto nanaitra ny mpitandro filaminana.
Androany tamin’ny sivy ora maraina no nidina teny ifotony nijery ny tranga, ary niaraka tamin’ny dokotera nitsirika ny razana.
Hita sy voaporofo fa tena ilay dahalo avy tao amin'ny Fokontany Soavinandriana, tratra nangalatra lavanila 25kg, volam-piangonana 2 tapitrisa ariary ary akoho amam-borona ny alin'ny zoma 3 aogositra ity hita faty ity. Ny alahady tokony tamin’ny fito ora maraina izy no votsotra teo ampelatan’ny Zandary, ary saika niteraka savorovoro teto Sambava, izay nilanjan'olona sora-baventy mihitsy.
jeudi, 09 août 2018 15:29
Fanirisoa Erinaivo: Nametra-pialana tsy ho filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara
Noho izy nirotsaka hofidiana filoham-pirenena no nambarany fa anton’izao fametraham-pialany izao ho fanajana ny fisaraham-pahefana.
Ny alarobia 8 aogositra 2018 no nametraka ny antontan-taratasy fametrahan-kofidiany teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana i Fanirisoa Erinaivo.
jeudi, 09 août 2018 11:27
Paul Razanakolona: Nivadika tamin’ny HVM koa ?
Isan’ireo mpanomana mavitrika ny fandraisana sy ny fikarakarana ny dian’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha Andry Rajoelina eto Antsirabe ny Ben’ny Tanàna Razanakolona Paul. Nisy ny fivoriana fanomanana izany ka niantsoan’ity Ben’ny Tanàna ity ireo sefo Fokontany eto an-toerana sy ny lefiny ny tolakandron’ny talata 07 aogositra. Nisy ny toromarika hanangonana olona hotaterina amin’ny fiara hanotrona ny kandidan’ny Tanora malaGasy Vonona eo amin’ny garan’Antsirabe amin’ny sabotsy 11 aogositra izao. Hanentana ny fotoana amin’io ny tarika Jerry Marcos sy ny artista roa hafa.
Nivadika amin’ny HVM angaha ny Ben’ny Tanànan’Antsirabe, hoy ny mpanara-maso politika ary niverina amin’i Andry Rajoelina toy ny tamin’ny 2009 indray. Izy rahateo moa isan’ireo mpomba an’i Andry Rajoelina rehefa niala tsy ho Tiako I Madagasikara ka niaraka tamin’ny MMM (Malagasy Miara-Miainga), izay niara-dalana tamin’ny filohan’ny Tetezamita ihany koa tamin’izany. Izay no heverina fa nanendrena an’i Razanakolona Paul ho lehiben’ny Faritra Vakinankaratra nandritra ny telo taona tamin’ny tetezamita, ho tambin’ny fanohanany an’i Andry Rajoelina.
jeudi, 09 août 2018 11:26
Portugal: May ny ala efa ho herinandro
Nanomboka ny zoma lasa teo no nirehitra ny ala ao Algarve, tanàna mahasarika mpizahatany ao atsimon'ny Portugal.
Mpamono afo sy miaramila 1 500 no mifandrimbona mamono ny afo, na an-tanety na anabakabaka, fiaramanidina mpamono afo sy helikopetera 12 no miditra an-tsehatra fa tsy mahatosika ny afo hatreto.
Maro no trano may ary mifindra monina ny mponina.
jeudi, 09 août 2018 10:34
Sambava: Fianakaviana iray lasibatry ny fanapoizinana sakafo
Zaza 03 taona niaraka tamin'ny zokiny 5, 7 sy 9 ary 17 taona ary ny ray aman-drenin’izy ireo no lasibatra ny alin’ny sabotsy teo, tany amin'ny Fokontany Ampangadiambato.
Fianakaviana tonga niantrano mba hatory fa tratra hariva no nahavanon-doza. Tamin’ny alalan’ny sakafo sy zava-pisotro nifampizarana ny hariva no nampiasany ny teti-dratsy. Renoka tsy nahatsiaro izay ambon’ny tany ny iray trano nony alina ny andro.
Californie: Efa ho 1 volana tsy maty ny afo mandoro ala sy trano
Mpamono afo mahatratra 14 000 amin'izao no miady amin'ny afo mandoro ny ala sy ny trano maro ao Californie Etats-Unis efa ho iray volana izao. Mifanome tanana amin'izany i Australie, Nouvelle-Zélande, ary miasa avokoa na ny fiaramanidina mpamono afo na ireo fiara vaventy an-tanety, fa dia tsy mahasakana ny afo, izay mandoro ala efa 120 000 ha hatreto.
Manampy trotraka ihany koa ny hafanana any an-toerana, ka ny 34% n'ny afo hatreto no maty.
Tazana eny amin'ny station spatiale eny anabakabaka lavitra eny mihitsy aza moa ity afo ity.
Olona 07 hatreto no voalaza namoy ny ainy, ankoatr'ireo trano marobe nirehitra.
Misy ny olona efa voasambotra ahiana nanao izao asa ratsy izao.
jeudi, 09 août 2018 08:03
Argentine: Nolavin'ny loholona ny volavolan-dalàna fanalan-jaza
Nangotraka ny ady hevitra teo anivon'ny antenimieran-doholona Argentine momba ny volavolan-dalàna momba ny fanalan-jaza.
Hatreto ny lalàna dia mamela ny fanalan-jaza raha misy ahiana ny fahasalamana mandritra ny fitondrana vohoka, na ireo zaza nipetraka vokatry ny fanolanana.
Etsy an-daniny kosa, maro ireo manala zaza an-tsokosoko, ka nahatonga ny fitakiana ny faneken'ny lalàna hanao izany fanalan-jaza izany raha mbola latsaky ny 14 herin'andro ny vohoka.
Ity firenena maro Katolika ity, izay fiavian'i Papa François anefa dia mandà ankitsirano izany fanalan-jaza, izay famonoana olona izany.
jeudi, 09 août 2018 08:02
jeudi, 09 août 2018 07:38
Présidentielle du 7 novembre: Un éventuel report dans l’air
Même si Andry Rajoelina se démène comme un beau diable afin de faire connaître à tous Madagascar son IEM (Initiative pour l'Emergence de Madagascar) et ce, après qu’il a réussi de chapeauter le premier ministre de consensus dont la seule mission est d’organiser les élections qui débuteront le 7 novembre prochain.
Mais tous les calculs de l’ex-PHAT risquent de tomber à l’eau et on se demande s’il n’est pas le seul à croire à ce calendrier. Beaucoup se pose la question si un éventuel report n’est pas dans l’air, en voici les raisons:
1- On est dans le début de la saison des pluies et selon la HCC, les élections ne doivent jamais se tenir à cette époque afin d’éviter les mauvaises conditions de transport risquant de fausser le bon déroulement du vote;
2- Le gouvernement de consensus est dépassé par cette insécurité généralisée (kidnapping, attaques à main armée partout). Personne ne sait qui est derrière ces individus possédant les mêmes armes que les forces de l’ordre;